ဘမ်းဆိုတဲ့အသံကြီးနဲ့ အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၁၂၀/၀ နဲ့ ၁၂၀/၁ ကြားမှာ . . . – XB Media Myanmar
တစ်နေကုန် အဲအမှုကိစ္စနဲ့ချာလပတ်လည်နေတာရယ် အမြန်လမ်းတောက်လျောက်မောင်းနေရတာရယ်ကြောင့် ခုမှတင်လိုက်တာပါ …
ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ ….ကျနော်လုပ်နေတဲ့ အမြန်လမ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Thesis အတွက် လိုအပ်တဲ့ Survey data လေးတွေကို ၃၉မိုင်တို့ ၁၁၅မိုင်တို့မှာကောက်ရင်း အမြန်လမ်းပေါ်တက်လာတယ်ဆိုပါတော့ ….
၁၁၅မိုင်မှာကောက်လို့ပြီးချိန် နေ့လည်၂နာရီလောက် နေပြည်တော်ဖက်ဆက်ထွက်လာပြီး ၅မိနစ်လောက်ပဲမောင်းရသေးချိန် မိုင်တိုင် ၁၂၀/၀ နဲ့ ၁၂၀/၁ ကြားမှာ ဘမ်းဆိုတဲ့အသံကြားပြီး မှန်တွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကျတဲ့အသံကြားလိုက်တယ်
အစကကိုယ်လည်းဘာမှန်းမသိသေးတော့ ဘေးချရပ်ပြီးစစ်ကြည့်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ လိုက်ကူပေးတဲ့ကျောင်းကသူငယ်ချင်း ညီမတစ်ယောက်က မရပ်နဲ့ မှန်ကို ဂွနဲ့ဆော်တာ ရပ်လိုက်ပြီးဆင်းလိုက်ရင် သူတို့တွေ အများကြီးအုံလာနိုင်တယ်လို့ချက်ချင်းသတိပေးလို့ သတိနဲ့ဆက်မောင်းလာလိုက်တယ် ….
အဲမှန်နေရာမှာထိုင်နေတာက ကျနော့်ညီဝမ်းကွဲ .. ကံကောင်းလို့လူထိမထိတာ .. ပုံမှာသာကြည့်ပါတော့ .. အဲဒါနဲ့ဆက်မောင်းရင်း ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ အမြန်လမ်းဒုရဲမှုးကြီးဆီပဲတိုက်ရိုက်ဆက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းဖြစ်စဉ်အကုန်ပြောလိုက်တော့ သူကအနီးဆုံး ၁၃၇မိုင်က ဗောဓိကုန်းရဲစခန်းဆီဝင်ပြီး ဖြစ်စဉ်ကိုအကုန်တိုင်ချက်ဖွင့်ခိုင်းလိုက်တယ် ….
အဲဒါနဲ့ဝင်ပြီး စခန်းမှုးကိုသတင်းပို့ … စခန်းမှုးကဖြစ်စဉ်ကို မှတ်မိသလောက်ပြောခိုင်းတော့ အသံကြားကြားချင်း ကျနော်က ညာဖက် back မှန်ကိုကြည့်လိုက်မိတာဆိုတော့ T-Shirt အပြာရောင်၊ ပုဆိုးအညိုခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့လူတစ်ယောက် မလှမ်းမကမ်းမှာ မြင်လိုက်မိတယ်ဆိုတာ လုံးဝသေချာမှတ်မိနေတော့ အဲဒါကိုသေချာပြောလိုက်တယ် (အောက်ဆုံးပုံ အနီဝိုင်းပြထား) …
အဲဒါတွေမှတ်တမ်းယူပြီးတာနဲ့ စခန်းမှုးကိုယ်တိုင် အဲဒီဖြစ်တဲ့ မိုင်တိုင် ၁၂၀ နားကိုချက်ချင်း သွားရှာပေးတယ် … ကျနော်တို့ကတော့ စခန်းမှာပဲကျန်ခဲ့ပြီး Car Black-box ကိုစစ်ကြည့်ကြတယ် .. အဲမှာစစ်ကြည့်လိုက်တော့ မှန်ကွဲတာမဖြစ်ခင် အမြန်လမ်းရဲ့ညာဖက်ခြမ်းကမြေကြီးသားပေါ်မှာ ကျနော်မြင်လိုက်မိတဲ့ပုံစံအတိုင်းလူကို တွေ့တော့တာပဲ ….
ကျနော်တို့ကား အဲလူကိုကျော်ကျော်ပြီးချင်း ကားမှန်ကွဲတာလည်းကွက်တိ .. ရုပ်ထွက်ကသိပ်တော့မကြည်ပေမယ့် ပုံပန်းသဏ္ဍာန်တော့ဖမ်းလို့ရတယ် ….အဲဒါနဲ့ချက်ချင်းအဲ black-box video file ကို ရှာတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်အောင် စခန်းမှုးဆီလှမ်းပို့ပေးပြီး ဖြစ်တဲ့နေရာကို ပြန်လိုက်သွား …
ရောက်တော့ အဲမိုင်တိုင်နားမှာ ကျွဲ၊ နွားကျောင်းနေတဲ့ ရွာသား၃ယောက်တော့ တွေ့လို့ခေါ်စစ်နေကြောင်း၊ ကိုယ်တွေမြင်ခဲ့တဲ့ လူနဲ့တူမတူကြည့်ချင်ရင်ကြည့်နိုင်ကြောင်း စခန်းမှုးကပြောတော့ လိုက်ကြည့် .. လိုက်ကြည့်တော့ ၃ယောက်စလုံးကတော့ ပုံထဲကလူလို့အတည်ပြုနိုင်လောက်အောင်မနီးစပ်လို့ သတိပေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ် .. ..
ရဲတွေလည်း အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ဆက်ပြီးတောနင်းပြီးရှာပေးကြပါတယ် .. စခန်းမှုးကလည်း တစ်ခုခုထူးခြားတာနဲ့ အကြောင်းကြားပေးမယ့်အကြောင်း .. ခရီးဆက်လိုကဆက်နိုင်ကြောင်းပြောတာနဲ့ကျနော်တို့လည်း Survey ကောက်ဖို့ လည်းရှိသေးတာနဲ့ဆက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် …
ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါပါပဲ … ၈နှစ်လောက်မောင်းလာခဲ့တဲ့အတွင်း စာတွေထဲမှာပဲဖတ်ဖူးတဲ့ ဒီလိုအမြန်လမ်း Crime ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ကြုံဖူးခြင်းပါ….။MandalayTimeDailyNews).
တဈနကေုနျ အဲအမှုကိစ်စနဲ့ခြာလပတျလညျနတောရယျ အမွနျလမျးတောကျလြောကျမောငျးနရေတာရယျကွောငျ့ ခုမှတငျလိုကျတာပါ …
ဖွဈပုံကဒီလိုပါ ….ကနြျောလုပျနတေဲ့ အမွနျလမျးနဲ့ပတျသတျတဲ့ Thesis အတှကျ လိုအပျတဲ့ Survey data လေးတှကေို ၃၉မိုငျတို့ ၁၁၅မိုငျတို့မှာကောကျရငျး အမွနျလမျးပျေါတကျလာတယျဆိုပါတော့ ….
၁၁၅မိုငျမှာကောကျလို့ပွီးခြိနျ နလေ့ညျ၂နာရီလောကျ နပွေညျတျောဖကျဆကျထှကျလာပွီး ၅မိနဈလောကျပဲမောငျးရသေးခြိနျ မိုငျတိုငျ ၁၂၀/ဝ နဲ့ ၁၂၀/၁ ကွားမှာ ဘမျးဆိုတဲ့အသံကွားပွီး မှနျတှတေဖွုတျဖွုတျကွှကေတြဲ့အသံကွားလိုကျတယျ
အစကကိုယျလညျးဘာမှနျးမသိသေးတော့ ဘေးခရြပျပွီးစဈကွညျ့ဖို့လုပျတဲ့အခြိနျမှာ လိုကျကူပေးတဲ့ကြောငျးကသူငယျခငျြး ညီမတဈယောကျက မရပျနဲ့ မှနျကို ဂှနဲ့ဆျောတာ ရပျလိုကျပွီးဆငျးလိုကျရငျ သူတို့တှေ အမြားကွီးအုံလာနိုငျတယျလို့ခကျြခငျြးသတိပေးလို့ သတိနဲ့ဆကျမောငျးလာလိုကျတယျ ….
အဲမှနျနရောမှာထိုငျနတောက ကနြေျာ့ညီဝမျးကှဲ .. ကံကောငျးလို့လူထိမထိတာ .. ပုံမှာသာကွညျ့ပါတော့ .. အဲဒါနဲ့ဆကျမောငျးရငျး ကိုယျနဲ့ရငျးနှီးတဲ့ အမွနျလမျးဒုရဲမှုးကွီးဆီပဲတိုကျရိုကျဆကျပွီးအကြိုးအကွောငျးဖွဈစဉျအကုနျပွောလိုကျတော့ သူကအနီးဆုံး ၁၃၇မိုငျက ဗောဓိကုနျးရဲစခနျးဆီဝငျပွီး ဖွဈစဉျကိုအကုနျတိုငျခကျြဖှငျ့ခိုငျးလိုကျတယျ ….
အဲဒါနဲ့ဝငျပွီး စခနျးမှုးကိုသတငျးပို့ … စခနျးမှုးကဖွဈစဉျကို မှတျမိသလောကျပွောခိုငျးတော့ အသံကွားကွားခငျြး ကနြျောက ညာဖကျ back မှနျကိုကွညျ့လိုကျမိတာဆိုတော့ T-Shirt အပွာရောငျ၊ ပုဆိုးအညိုခပျနှမျးနှမျးနဲ့လူတဈယောကျ မလှမျးမကမျးမှာ မွငျလိုကျမိတယျဆိုတာ လုံးဝသခြောမှတျမိနတေော့ အဲဒါကိုသခြောပွောလိုကျတယျ (အောကျဆုံးပုံ အနီဝိုငျးပွထား) …
အဲဒါတှမှေတျတမျးယူပွီးတာနဲ့ စခနျးမှုးကိုယျတိုငျ အဲဒီဖွဈတဲ့ မိုငျတိုငျ ၁၂၀ နားကိုခကျြခငျြး သှားရှာပေးတယျ … ကနြျောတို့ကတော့ စခနျးမှာပဲကနျြခဲ့ပွီး Car Black-box ကိုစဈကွညျ့ကွတယျ .. အဲမှာစဈကွညျ့လိုကျတော့ မှနျကှဲတာမဖွဈခငျ အမွနျလမျးရဲ့ညာဖကျခွမျးကမွကွေီးသားပျေါမှာ ကနြျောမွငျလိုကျမိတဲ့ပုံစံအတိုငျးလူကို တှတေ့ော့တာပဲ ….
ကနြျောတို့ကား အဲလူကိုကြျောကြျောပွီးခငျြး ကားမှနျကှဲတာလညျးကှကျတိ .. ရုပျထှကျကသိပျတော့မကွညျပမေယျ့ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျတော့ဖမျးလို့ရတယျ ….အဲဒါနဲ့ခကျြခငျြးအဲ black-box video file ကို ရှာတဲ့နရောမှာအထောကျအကူဖွဈအောငျ စခနျးမှုးဆီလှမျးပို့ပေးပွီး ဖွဈတဲ့နရောကို ပွနျလိုကျသှား …
ရောကျတော့ အဲမိုငျတိုငျနားမှာ ကြှဲ၊ နှားကြောငျးနတေဲ့ ရှာသား၃ယောကျတော့ တှလေို့ချေါစဈနကွေောငျး၊ ကိုယျတှမွေငျခဲ့တဲ့ လူနဲ့တူမတူကွညျ့ခငျြရငျကွညျ့နိုငျကွောငျး စခနျးမှုးကပွောတော့ လိုကျကွညျ့ .. လိုကျကွညျ့တော့ ၃ယောကျစလုံးကတော့ ပုံထဲကလူလို့အတညျပွုနိုငျလောကျအောငျမနီးစပျလို့ သတိပေးပွီးပွနျလှတျလိုကျတယျ .. ..
ရဲတှလေညျး အုံနဲ့ကငျြးနဲ့ ဆကျပွီးတောနငျးပွီးရှာပေးကွပါတယျ .. စခနျးမှုးကလညျး တဈခုခုထူးခွားတာနဲ့ အကွောငျးကွားပေးမယျ့အကွောငျး .. ခရီးဆကျလိုကဆကျနိုငျကွောငျးပွောတာနဲ့ကနြျောတို့လညျး Survey ကောကျဖို့ လညျးရှိသေးတာနဲ့ဆကျထှကျလာခဲ့လိုကျတယျ …
ဖွဈစဉျကတော့ဒါပါပဲ … ၈နှဈလောကျမောငျးလာခဲ့တဲ့အတှငျး စာတှထေဲမှာပဲဖတျဖူးတဲ့ ဒီလိုအမွနျလမျး Crime ကို ပထမဆုံးအကွိမျကွုံဖူးခွငျးပါ….။MandalayTimeDailyNews).